IApartment Drava 2
Ukuba ukhetha ukuzola endaweni yobunewunewu uze kwindawo elungileyo! ilungele ukuloba iDubravski Canal amanyathelo ambalwa ukuya emlanjeni !!!isityebi kakhulu kwiintlanzi ukhuphiswano oluninzi lokuloba, i-kayaking, ukuzingela, ukukhwela ibhayisekile, onokuthi kwakhona urente kum! Ukuhambahamba kwaye ukonwabela ukuzola. Zonke iivenkile edolophini. Uninzi olunokwenzeka lohambo. Phakathi kweKoprivnica kunye neCakovec.
Indlu enkulu emalunga ne-100 yeemitha zesikwere kumgangatho woku-1 kwaye inegumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini 180 + 200m, igumbi lokuhlala elinebhedi ekhululekileyo yesofa 140 + 200m, ikhitshi elikhulu elinazo zonke izinto zasekhitshini kunye nebhedi yesofa 120 + 200m, kwindlela enkulu, a Anteroom netafile bar, ufika Terrace nge kwelinye igumbi.
Kwimozulu epholileyo kufuneka ufudumale ngesitofu sokhuni, ukhuni lukhona
Indawo yokubhaka ezantsi nje kwesitrato ngasekhohlo, ugqirha, ikhemesti, ivenkile enkulu, ibhanki, iposi kumbindi wedolophu. Ikhosi yegalufa ⛳ 10 km inkundla yentenetya 15 km Zagreb 120 km Budapest 200 km Lake Balaton 60 km
Ungatya kwindawo yokutyela "Mlin" malunga neekhilomitha ezi-3 kwicala le-Kotoriba, iGalufa yeHotele malunga neekhilomitha ezi-5, okanye ivenkile enkulu kakhulu kwaye ingabizi kakhulu i-KTC malunga ne-10 km ukusuka kwi-Prelog.
Ekubeni ndihlala eJamani kwaye ndingekho, u-Blaženka endibambisene naye unyamekela iindwendwe ngokusondeleyo kubo, kuye nabo bafumana isitshixo kwaye uyakuvuyela ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo, okanye ungasebenzisa ibhokisi yesitshixo. . ukuba kamva ufika ke nokusoloko ayinakufunyanwa ngokugqitha kwi Internet kule nombolo yam: 004917634506010
Ekubeni ndihlala eJamani kwaye ndingekho, u-Blaženka endibambisene naye unyamekela iindwendwe ngokusondeleyo kubo, kuye nabo bafumana isitshixo kwaye uyakuvuyela ukukunceda ngayo n…